Xiisad Ka taagan Nidaamka 4.5 ee Ciraaq & Raysalwasaaraha oo ku hanjabay inuu iscasilayo! - iftineducation.com
Xiisad Ka taagan Nidaamka 4.5 ee Ciraaq & Raysalwasaaraha oo ku hanjabay inuu iscasilayo!
iftineducation.com – Raysalwasaaraha dalka Ciraaq Haydar Al Abadi ayaa sheegay inuu xilka ka degayo hadii laga horyimaado Isku-shaandheyn uu doonayo inuu ku sameeyo Xukuumada.
Hogaamiyaha Xukuumada Ciraaq ayaa sheegay in nidaamka awood qeybsiga 4.5 ee dalka Ciraaq uu yahay mid caqabad ku ah la dagaalanka Musuq Maasuqa iyo waliba maamul wanaaga xukuumadiisa.
Dowlada Ciraaq ayaa awooda loogu qeybiyey nidaamka 4.5 oo ah; 1-Shiico, 2-Sunni, 3-Kurdi, 4-Carabta Kirishtaanka ah iyo 5-Inta kale qawmiyadaha ku nool dalkaasi Ciraaq.
Nidaamkan ayuu Haydar Al Abadi uu sheegay inuu keenay in xilalka Wasiirada loo qeybiyey xubno qaarkood aan xilkaasi u qalmin, wuxuuna sheegay inuu bedali doono gebi ahaan qaab dhismeedka Golaha Wasiirada isagoo soo magacaabi doona Wasiiro u badan aqoonyahano khibrad ulleh shaqada loo dhiibayo.
Balse Baarlamaanka Ciraaq oo isagu weli ku dhisan nidaamka 4.5 ayaa marar badan horjoogsaday in la garab maro nidaamkaasi awood qeybsiga ah oo dalkaasi laga hirgelinyey xiligii la dhisayey dowlada Ciraaq kadib maamulkii KMG ee uu Maraykanka wadankaasi ka sameeyey.
“…Diyaar baan u ahay inaan xilka iska casilo, oo xilkan isku dhajin maayo, sidoo kale mas’uuliyada isaaran kama weecan doono waana ku dhaqaaqi doonaa isbedalka loo baahan yahay…”ayuu yiri Raysalwasaare Haydar Al Abaadi oo la hadlayey telefishinka dowlada Ciraaq.
Dalka Brazil oo xanibay hantida Neymar